Singapaoro: Fivoriana voalohany ho an’ireo pelaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2018 7:29 GMT
Vakio amin'ny teny Français, srpski, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Español, English
Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny May 2009.
Sary nampiakarin'i macbiff tao amin'ny Flickr.
Olona mihoatra ny 2 500 no nifamory tao amin'ny valan-javaboaharin'ny Hong Lim tao Singapaoro mba hanaovana teboka mavokely vita avy amin'ny olombelona – manamarika ny fitiavana sy ny fampidirana. Izany no fivoriana voalohany ankalamanjana natao ho an'ny vondrom-piarahamonina LGTB (ho an'ny vehivavy tia vehivavy, lehilahy tia lehilahy, olona manana taovam-pananahana roa ary ireo niova fananahana).
Nokarakarain'ny fikambanana PinkDot (teboka mavokely) ity hetsika manantantara ho an'i Singapaoro ity [amin'ny teny anglisy].
Ao amin'ny PinkDot, mihevitra izahay fa ny dingana voalohany, mba handravana ireo sakana ireo, dia tokony hatao miaraka amin'ireo singa malala-tsaina rehetra ao anatin'ny fiarahamonina iray. Izay no nahatonga anay nampiakatra an-tambajotra ity sehatra ity natokana ho an'ireo olona, fikambanana sy orinasa ahiahiana mety hilaza ny tenany ho mpiaro ny Singapaoreana manaiky tsara ny hampiditra sy ho tia ny namany.
Na dia miaina ao anatin'ny fiarahamonina fehezin'ny lalàna mpitahiry ny nentindrazana aza izy ireo, tonga nanome ny fanohanany ny Singapaoreana maro [amin'ny teny anglisy]. Ireto misy fanehoankevitra vitsivitsy notsongaina tao amin'ny blaogin'ny PinkDot :
Fabulista: Oueee! Tena nifaly be tsisy ohatr'izany isika ! Misaotra tamin'ny fikarakarana ! Tena miherahera fatratra tamin'ny nahafahako nandray anjara tamin'ity hetsika manantantara ity aho, misy dikany ary MAMPIHOMEHY! Tsy andriko izay handraisako anjara amin'ny manaraka !
Aze Lee : Voalohany hiarovako ny zoko izao… Miarahaba tamin'ny fanaovana ity hetsika mahafinaritra feno fitiavana ity !!
fnhh : Misaotra ireo mpikarakara tamin'ny fanaovana ilay hetsika. Tena voalamina tsara sady nampihetsi-po be ilay izy. Tena mirehareha tokoa tamin'ny nandraisako anjara tamin'ity hetsika, tsara be, misy dikany, ary tsy hay adinoana ity aho. Tsy andriko ny teboka mavokely manaraka !
Ilay famoriambahoaka nataon'ny fikambanana PinkDot tao Singapaoro.
Afaka mijery ity lahatsary ity natao nandritra ilay famoriambahoaka ” teboka mavokely ” ianao, nokarakaraina tamin'ny 16 May, ary nampiakarina tao amin'ny YouTube :
Natao ho an'ny Singaporeana rehetra [amin'ny teny anglisy], ho an'ny taona rehetra, na pelaka na tsia, ilay fihetsiketsehana.
Riku : Tena mirehareha amin'ireo rehetra nanohana ilay hetsika aho. Tena fomba nahafinaritra hiainana Sabotsy tolakandro iny, lavitra an'ireo toeram-pivarotana, ny trano fanatanjahantena sy ny dobo filomanosana.
Tena ”mendri-kaja” avokoa ireo olana rehetra tany. Tsy nisy sakana nakely aza… Tena faly be aho nahita olona maro tany izay efa nahazoazo taona ihany – izay mety ho dadabe na bebe an'ireo mpiaro ny zon'ny LGBT.
Sojourner : Tena nahafinaritra be ny nahita olona maro toy ireny nitambatra ho an'ilay fihetsiketsehan'ny PinkDot mba hilazana avo sy mafy ny faniriantsika, tena olombelona tsara, amin'ny fanaikena sy fankalazana ny fitiavantsika ireo sakaizantsika sy vadintsika.
Nisafidy ireo sakaizantsika isika, tsy nijerena (ary matetika na eo aza) ny firazanany, ny fananahany, ny sokajy ara-tsosialin'izy ireo, satria ilay olona manontolo no ekentsika; olona izay voafaritr'ireo singa ireo ary anefa mihoatra lavitra amin'izany noho ny maha-olombelona azy fotsiny – ambonin'ny firazanana, ny fananahana sy ny sokajy ara-tsosialy.
PinkDot (Teboka mavokely): ilay famoriambahoaka voalohany ho an'ireo LGBT tao Singapaoro.
Nanao tatitra an-dahatsary momba ilay hetsika [amin'ny teny anglisy] ny blaogy The online Citizen a. Afaka mijery ity sarimihetsika hafa iray ity ianao, navoaka tao amin'ny Youtube, izay mampahafantatra sy manazava ny tanjon'ny PinkDot ianao :
Nahatezitra ny blaogera DK ny nandefasan'ny mpandray anjara sasany ireo balaoniny ho eny an'habakabaka .
Rahoviana àry ny olona vao hahafantatra fa ratsy ho an'ny tontolo iainana ny famotsorana balonina betsaka be? Toy ny manary fako amin'ny tany ihany izany. Fa izany hoe manidina any an'habakabaka aloha ity karazana fako ity vao midina eny amin'ny tany any amin'ny kilaometatra lavidavitra kokoa. Raha milatsaka any an-dranomasina ilay balaonina (izay mety hitranga kokoa raha toa ka heverina ny maha-voahodidina ranomasina an'i Singapaoro), mety hiteraka loza mitatao ho an'ny fiainana an-dranomasina izany.
Ny fihetsiketsehana tao Singapaoro : Ny Fahalalahana hitia.